Zadza Chinyorwa che SQL Server MDF Faira Zvikanganiso uye Matambudziko
musha Products DataNumen SQL Recovery Zadza Rondedzero Yezvikanganiso
SQL Server Zvikanganiso uye Matambudziko
Zadza Rondedzero yezvikanganiso uye Matambudziko mu SQL Server MDF Dhatabhesi Mafaira
Paunoshandisa Microsoft SQL Server kubatanidza kana kuwana yakashata MDF dhatabhesi faira, iwe uchaona akasiyana mhosho mameseji, izvo zvinogona kunge zvichikanganisa kwauri. Naizvozvo, pano isu tichaedza kunyora zvese zvingangoitika zvikanganiso, zvakarongedzwa zvichienderana nekuwanda kwavo kuitika. Kune imwe neimwe kukanganisa, isu tinotsanangura chiratidzo chayo, tsanangura chikonzero chayo chaicho uye topa sampuro mafaera pamwe nefaira rakagadziriswa neyedu DataNumen SQL Recovery, kuti iwe ugone kuvanzwisisa zviri nani. Pazasi isu tinoshandisa 'xxx.MDF' kuratidza huori hwako SQL Server MDF dhatabhesi zita refaira.
Maererano ne SQL Server kana CHECKDB mhosho mameseji, kune matatu marudzi emhosho ayo anogona kukonzera kutadza:
Kugovera zvikanganiso: Isu tinoziva iyo data mune MDF & NDF mafaera akagoverwa se mapeji. Uye kune mamwe akakosha mapeji ayo anoshandiswa kuitira kugovera manejimendi, seinotevera:
Peji Rudzi tsananguro
GAM Peji Chengetedza pasi rose mepu yekugovera (GAM) info.
SGAM Peji Chengetedza yakagovaniswa yepasi rose kugovera mepu (SGAM) info.
IAM Peji Chitoro chekodhi yekugovera mepu (IAM) info.
PFS Peji Chengetedza PFS kugovera info.
Kana chero emapeji ekugovera ari pamusoro aine zvikanganiso, kana iyo data inochengetwa neaya mapeji ekuparadzanisa zvisingaenderane neruzivo rwekugovera, saka SQL Server kana CHECKDB inozivisa zvikanganiso zvekugovera.
Kukanganisa kusagadzikana: For mapeji ayo anoshandiswa kuchengeta data, kusanganisira iwo mapeji e data uye mapeji e index, kana SQL Server kana CHECKDB tsvaga chero kusapindirana pakati pezvirimo peji uye cheki, vanobva vazvitaurira kuwirirana zvikanganiso.
Zvimwe zvese zvikanganiso: Panogona kunge paine zvimwe zvikanganiso zvisingawire muzvikamu zviviri zviri pamusoro.
xxxx.mdf harisi rekutanga dhatabhesi faira. (Microsoft SQL Server, Kukanganisa: 5171)
Musoro wefaira 'xxxx.mdf' haisi dhatabhesi faira musoro. Iyo FILE SIZE chivakwa haina kururama. （Microsoft SQL Server, Kukanganisa: 5172）
SQL Server yakaona zvine mutsindo kuenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo checksum
SQL Server yakaona inowirirana isingachinjiki-yakavakirwa I / O kukanganisa: rakabvamburwa peji
Unodzima mamwe marekodhi kana mamwe matafura mudhatabhesi nekukanganisa
SQL Server ine mudziyo wakavakirwa unonzi DBCC, ine CHECKDB uye CHECKTABLE sarudzo dzinogona kubatsira kugadzirisa yakashata MDF dhatabhesi. Nekudaro, kune akanyanya akakuvara MDB dhata dhata, DBCC CHECKDB uye CHECKTABLE zvichakundikanawo.
Kukanganisa kusagadzikana kwakataurwa neCHECKDB:
Mutsara mu sys.xxx haina mutsara unowirirana mu sys.xxx.
Tafura yekukanganisa: Chinhu ID # #, index ID # # ichavakwazve.
Iyi system tafura indekisi haigone kuitwazve.
Chinhu ID # #, index ID # #, ID yekuparadzanisa # #, govera unit ID # # (mhando Isingazivikanwe), peji ID (# #: 560) ine iyo isiriyo peji ID mune yayo peji musoro.
Kugovera zvikanganiso zvinotaurwa neCHECKDB:
Iyo Index Kugovera Mepu (IAM) Peji inonongedzerwa kune Inotevera Pointer yeIAM Peji
Extent (##: ##) mune dhatabhesi ID # # yakamisikidzwa yakapihwa muGAM, asi hapana SGAM kana IAM yakazvigovera.
Zvimwe zvese zvikanganiso zvakataurwa naCHECKDB:
Zvakundikana: (- #######) Kuita mubvunzo "DBCC CHECKDB (xxxx) KUNE NO_INFOMSGS" kwakundikana nekanganiso inotevera: "xxxx".
Ini / O kukanganisa (rakaipa peji ID) rakaonekwa panguva yekuverengwa pakukanganisa 0x ###### mufaira 'xxxx.mdf'.
Sisitimu Haigone Kugonesa Zvakaringana ZveDhatabhesi Kuvakazve Iyo Log
Kurasikirwa kweData Kana Uchigadzirisa NaCHECKDB
Faira rinoratidzika kunge rakatemwa nesisitimu yekushandisa.
Munguva yekuitisa patsva kweakakanda mashandiro mudhatabhesi 'xxxx', kukanganisa kwakaitika paRekodhi rekodhi ID.